स्वास्थ्य - TheSidhaKura
आजभोलि धेरै ग्यास्ट्रिकको समस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन् । ग्यास्ट्रिक नभएका मानिस भेट्न मुस्किल पर्छ । यो समस्या विभिन्न कारणले देखा पर्छ । ग्यास्ट्रिक नेपालीको राष्ट्रिय रोग हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । धेरैको ग्यास्ट्रिक गुनासो सुन्न पाइन्छ हिजोआज । मानिस खान नपाएरभन्दा पनि खान नजानेर रोगी छ हिजोआज । त्यसो भए के गर्ने… Read More »
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला। ९८ – ९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला। शरीर दुखेमा र टाउको दुखेमा पनि पारासिटामोल खान सकिन्छ। २. पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला। यदि ९४ भन्दा तल गयो भने घोप्टो परेर सुत्नुहोला। यसलाई प्रोन पोजिसन भनिन्छ। पेटमा २ वटा सिरानी, टाउकोमा एउटा सिरानी र खुट्टाको… Read More »
काठमाडौँ । खुट्टाको पैतालामा मालिस गर्दा शरीरमा विभिन्न फाइदाहरु हुन्छन्। अझ राति सुत्नुअघि खुट्टाको पैताला मालिस गरेमा स्वास्थ्यलाई निकै नै फाइदा हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन्। सुत्नुअघि पाइतालामा मज्जाले १५ मिनेट मालिस गर्नुभएमा शरीरको मेटाबोलिजम ठीक रहन्छ । यस्तै राति पैतलामा मसाज गर्दा तौल घट्ने र बोसो पनि कम हुन्छ। यस्तै सुत्नुअघि पैतला मालिस गर्दा दिनभरिका तनाव… Read More »
मौसम परिवर्तन हुँदैछ। रुघा-खोकी सहजै फैलिन सक्छ। अझ बच्चाहरु बढी रुघाग्रस्त हुने गर्छन्। रुघाको लागि जति औषधी सेवन गरिन्छ, त्यति नै यसले पछिसम्म सताइरहन्छ। तर जति नै औषधी खाएपछि एक निश्चित समय नआएसम्म रुघा सञ्चो भइहाल्दैन। त्यसैले सबैभन्दा उत्तम उपाय नै खानेकुरामा ध्यान दिने हो। तरल खानेकुराः रुघा विरुद्ध हतियार जब रुघा लाग्छ, तब शरिर… Read More »
९० प्रतिशत मानिस मिर्गौला बिग्रिएपछि मात्र पुग्छन् अस्पताल
काठमाडौँ : अस्वस्थ जीवनशैलीले मिर्गौला रोग लाग्ने भएकाले स्वस्थ जीवनचर्या बिताउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बागमती सफाइ महाअभियान र हामी साथ छौँ अभियानले बिहीबार बेलुकी जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मृगौला रोग केन्द्रका प्रमुख प्रा डा ऋषिकुमार काफ्लेले ९० प्रतिशत मानिस मिर्गौला बिग्रिएपछि मात्र अस्पताल पुग्‍ने गरेको बताए । केन्द्रमा हाल दैनिक २५०… Read More »
गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै,एघार महिनामा एक हजारले गरे गर्भपतन
डोटी, ३१ असार – जिल्लामा एघार महिनाको अवधीमा एक हजार सात जनाले गर्भपतन गराएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को जेठसम्ममा जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको उक्त सङ्ख्या पुगेको छ ।कार्यालयको तथ्याङ्क जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन भएसँगै गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या निकै बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्लामा जम्मा १६ स्वास्थ्य… Read More »
किन फरफराउछ आँखा? के शुभ र अशुभसँग यसको सम्बन्ध छ?
काठमाडौँ – समाजमा आँखा फरफराउदा राम्रो, नराम्रो घटना वा खबर प्राप्तिको संकेत हो भन्ने विश्वास छ। आँखा फरफराउने बित्तिकै जोसुकैले पनि कुनै न कुनै कुराको अनुमान लगाइरहेका हुन्छन्। आँखा फरफराउनुलाई परापूर्व कालदेखि नै कुनै पनि घट्ने कुराको संकेतको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर चिकित्सकका अनुसार भने आँखा फरफराउनु कुनै पनि घटनाको संकेत नभएर यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको… Read More »
साबधान ! कानको समस्याले निम्त्याउँछ मानसिक रोग
कान नसुन्ने समस्या ९हियरिङ लस०बाट पिरोलिरहनुभएको छ भने मानसिक तनाव उत्पन्न हुनसक्नेमा सचेत रहनुहोला । कान नसुन्ने समस्याले पनि मानसिक रोग निम्त्याउँछ । निजामती कर्मचारी अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा। निर्मला तामाङले कान नसुन्ने समस्याका कारण धेरैमा मानसिक रोगको समस्या देखिएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “धेरै बिरामीले कान नसुनेकै कारण एन्टी डिप्रेसनको औषधि… Read More »
ओठ फुटेर हैरान हुनुभएको छ ? यस्ता छन् जोगाउने उपाय
जाडो मौसममा ओठ फुट्ने समस्या आउने गर्दछ । जाडोमा ओठको बाहिरी भाग फुटेर रगतै आउने अवस्था सम्म बन्न जाने भएका कारण यसबाट बच्नका लागि यी उपायहरु उपनाउन जरुरी हुन्छ । लिपबाम दल्नुस् समय–समयमा ओठमा लिपबाम दल्ने गर्नुस्। भिटामिन ई र मौरीको चाकायुक्त लिपबाम लगाउनु अझ राम्रो हुन्छ। स्क्रब गर्नुस् फुटेको ओठमा मृत छालाका पत्र हुन्छन्,… Read More »
सम्बन्ध बनाउन जति सजिलो छ, त्यसलाई निर्वाह गर्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । जीवनमा खुशीहरु राम्रो सम्बन्धबाटै अँउँछन् । भनिन्छ, जोडीहरु स्वर्गमै तय गरिएको हुन्छ । तपाईंको सम्बन्ध तपाईको व्यवहार, तपाईंको सुझबुझ तथा एक–अर्कालाई सम्झन सक्ने क्ष्ँमतामा निर्भर गर्दछ । पुरै जिन्दगी बिताउने सक्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई खोज्नु आफेंमा एटा गाह्रो कार्य हो । हरेक सम्बन्धमा उतार–चढावहरु… Read More »